DOWNLOAD Concorde နောက်ဆုံးဗားရှင်း-A 2011 FS2004 - Rikoooo
အရွယ် 47.2 ကို MB
downloads ရယူရန္ 29 344
သစ်တစ်ခုနှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်, visor အသေးစိတ်ပျံသန်းဒိုင်းနမစ်, ပြည့်စုံမှန်ကန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအထုပ် -new မစမီ-PRODUCTION texture- VC ကိုပြားများအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, wings' vortices နှင့်မြူများအတွက်အထူးသက်ရောက်မှု, afterburner သက်ရောက်မှု: ဤတွင်ပါဝင်သည်ရာ Concorde သစ် 3d မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် , ဆင်းသက်ဂီယာစစ်ဆင်ရေးအဓိက 2D ယာဉ်အမြင်များအတွက်ကာတွန်း visor, Mach မြန်နှုန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု (မစ္စတာရော့ Barengredt's) နှင့်ဆက်စပ် lights' ကာတွန်းလေယာဉ်ဆင်းသက်။ ထို့အပြင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဒိုင်းနမစ်မှချိန်ညှိတွေအများကြီးဖန်ဆင်းတော်မူသောအလွန် tallented မစ္စတာ Hans ZUIDERVAART ကဒီဇိုင်း xml gauge ဖြင့်ထိန်းချုပ်အားလုံး, VC ကို (အားလုံး FS9 အတွက်အချို့အတွက်အပေါ် (သူ၏အကူအညီအများအပြားကျေးဇူးတင်စကား !!!!), သာမန်နှိပ် gauge FSX), အသံ, VC ကို, ခရီးသည်ရဲ့အမြင်များ, ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းနှင့်စသည်တို့ကိုပြည့်စုံအလင်းအိမ်, အပြည့်အဝကာတွန်းအစိတ်အပိုင်းများ, rudder, ဓာတ်လှေကားနှင့်ဆင်းသက်ဂီယာစစ်ဆင်ရေးများအတွက် (လေယာဉ်မှူးများနှင့် copilot ကာတွန်း), အခန်းတံခါးကိုအဓိကနှင့်ကုန်တင်တံခါးများ,
ဒီနည်းကို VERSION ယခင်ဗားရှင်းကိုအစားမထိုးပါဘူး, WICH မှာ FIRST ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ NO ပြုပြင်မှုများလို
- tipical ပညတ်တော်ကို အသုံးပြု. အပြည့်အဝကာတွန်းအစိတ်အပိုင်းများ, ။
- ဆင်းသက်အလင်းအိမ်တိုးချဲ့: သူတို့ကအလိုအလျှောက်တိုးချဲ့လိမ့်မည်: နေဆဲမြေပေါ်မှာ, အလင်းအိမ်ဖွင့်သောအခါ, ပျံသန်းသောအခါ, ဆင်းသက်ဂီယာတိုးချဲ့နှင့်အလင်းအိမ်အပေါ်လှည့်။
- ပွင့်လင်း / နီးကပ်လေယာဉ်တံခါးကို, သင့် TAILHOOK command ကိုနှိပ်ပါ။
- ခရီးသည်တင်တံခါးကို: စာနယ်ဇင်း "" SHIFT + E ကို "။
- အခြားတံခါးများကို: စာနယ်ဇင်း "" SHIFT + E ကို +2"။
- နှစ်ကြိမ်, "F7" ချွတ်ယူပြီးအဘို့အနှာခေါင်းနှင့် visor တိုးချဲ့။
တခါသတင်းစာ "F370": - ပထမဦးဆုံးချဉ်းကပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့အနှာခေါင်း (7 ထုံးထက်ပိုမြန်မပါ) ကိုတိုးချဲ့နေ။
စာနယ်ဇင်း "F325" တစ်ဖန်: - ဒုတိယချဉ်းကပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့အနှာခေါင်း (7 မိုင်ထက်ပိုမြန်မပါ) ကိုတိုးချဲ့နေ။
- နောက်ဆုံး aproach (270 ထုံး) အတွက်တိုးချဲ့နှာခေါင်း: စာနယ်ဇင်း "F8" (အပြည့်အဝခတ်) ။
- အခုအဓိက 2D လေယာဉ်မှူးအခန်းအမြင်အပေါ် Visor သည်ဤတူညီသောထိန်းချုပ်မှုများကကာတွန်းကားဖြစ်ပါတယ် !!!
- လေယာဉ်အမှုထမ်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအပြင်ပန်းအမြင်နှင့် VC ကိုရသောအခါ operating တက်မ, ဓာတ်လှေကားနှင့်ဆင်းသက်ဂီယာပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
- နောက်ပြန်: စာနယ်ဇင်း "F2" ရုံ (engines'exhausts အပေါ်ကာတွန်းကိုကြည့်ပါ) ထိအပြီး။
- Engines' စားသုံးမှုအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာပေါ် မူတည်. ကာတွန်းကား။
- "Ctrl + J ကို" ကိုသုံးပါနှင့်အခါ, ကားရပ်နား airports'service မော်တော်ယာဉ်များကိုသက်ဝင်မှအင်ဂျင်ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။
McDonnell Douglas MD-11 ဆွစ်ဇာလန် FS2004
ဗြိတိန်နိုင်ငံကလေယာဉ်ကော်ပိုရေးရှင်း BAC 1-11 FS2004